विद्यालयमा खेतीपाती गर्ने ‘हेडसर’ : एकातिर व्यावसायिक शिक्षा, अर्काेतिर कमाइ
जेठ १८, २०७६
सुर्खेत – तनहुँमा जन्मेर बर्दियामा हुर्केका एक व्यक्ति कर्णालीमा चर्चित छन् । उनलाई धेरैले प्रश्न सोध्ने गर्छन् – नारायण सिग्देल सर तपाई शिक्षक कि व्यवसायी ?
उनको जवाफ हुन्छ – म व्यावसायिक शिक्षक हो । विद्यार्थीलाई व्यवसायी बनाउने शिक्षकको रुपमा आफूलाई उनले स्थापित गर्न खोजिरहेको बताउँछन् ।
तनहुँको किहुँहुँक्कामा जन्मेका सिग्देल ३० वर्षदेखि कर्णालीको बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा ‘हेडसर’ (प्रधानाध्यापक) छन् । नम्र स्वभावका सिग्देलले विद्यालयलाई कर्णालीभरि नै चिनाइसकेका छन् ।
यति मात्रै होइन, विद्यालय नेपालमै प्रख्यात सामुदायिक विद्यालयको रुपमा चिनिसकेको छ । उनी अध्यापनरत विद्यालयमा २६ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने र फर्किंदा पैसा कमाएर लैजाने गर्छन् ।
विद्यालयमा अनार खेती
प्रधानाध्यापक सिग्देलका अनुसार विद्यालयले अनार खेतीको शुरूवात गर्ने भएको छ । विद्यालयको २५ रोपनी जमिनमा १ हजार अनार रोप्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘अनारको बेर्ना हामीले भारतको नासिकबाट ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘१ रोपनी जग्गामा ४० विरुवा रोप्न सकिने र ३ वर्षपछि कम्तिमा पनि प्रतिविरुवाले २ क्विन्टल अनार उत्पादन दिनेछ ।’
विद्यालयको नर्सरीमा १० हजार अनारका बेर्ना हुर्किरहेका छन् । १ बेर्नाको मूल्य २ सय ५० रुपैयाँ हो । बराहताल–८ ग्वालेकाँडामा विद्यालयको २ सय रोपनी जमिन छ, अहिले त्यहाँ बाख्रापालन भइरहेको छ ।
अम्लिसोको कुचो खरिद गर्न विद्यालयले अन्यत्र जानै पर्दैन । त्यहाँ उत्पादन भएको अम्लिसो नै विद्यालयका लागि आयआर्जनको माध्यम तथा विद्यालयको पैसा जोगाउने साधन बनेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई रोजगारी दिने योजना
प्रधानाध्यापक सिग्देलले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँसम्मको रोजगारी दिने योजना बनाएको बताए । ‘पशुपालन भइरहेको छ । तरकारी खेती भइरहेको छ । अनार खेतीको शुरूवात गर्दैछौं । मौरीपालनबाट लाखौं आम्दानी भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गाईपालन र माछापालन पनि भएको छ । २ वटा ट्याक्टर पनि छन् ।’ यी सबै कुरा व्यवस्थापन गर्दा उत्पादन बढ्ने र त्यहीबाट सदस्यलाई रोजगारी दिने योजना बनाइरहेको उनले बताए ।
सिक्न इच्छुकलाई तालिम
उनले देशभरबाट पशु तथा बाली विज्ञानबारे सिक्न आए निःशुल्क सिकाउने बताए । ‘कोही हामी कहाँ सीप सिक्न भनेर आए भने हामी सिकाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘कोही आएको खण्डमा तालिम दिने र सामान खरिद गर्न पनि माध्यम बनिदिन्छौं । जुम्लाको व्यक्तिले जति ओखर उत्पादन गर्छन्, हामी बिक्री गर्न सक्छौं । बाली विज्ञान र पशु सम्बन्धी तालिम दिन्छौं । लगानीका लागि एनएमबी बैंकसँग जोडिदिन्छौं । ऋण पाउने कुरा पनि हामी पक्का गर्दिन्छौं ।’ तर त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनले बताए ।
९ कक्षामा पढ्दै गर्दा बुवा गुमाएका सिग्देलले बुवा आमा गुमाएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कसरी दिन सकिन्छ भन्ने मनमा लागिरहने बताए । गाउँका विक्रम सुनारलाई उनले ६ कक्षाबाट विद्यालयमा निःशुल्क पढाएका थिए । ११ र १२ कक्षामा विज्ञान संकाय सुर्खेतस्थित सुर्खेत होराइजन एकेडेमीले गराइदिएको बताउँदै हाल विक्रम काठमाडौंमा एमबीबीएसको तयारी गरिरहेको उनले बताउँछन् । उनलाई सहयोग गर्ने कोही भए विक्रमको डाक्टर बन्ने धोको पूरा हुने उनले बताए ।
विद्यालयमा अध्ययन गरेका हरेक विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनून् भन्ने सिग्देलको अपेक्षा छ । ‘आगामी ५ वर्षमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई स्वरोजगारमा लैजाने कल्पना गरेका छौं र हामी सक्छौें,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालय नमूना भयो । ५६ करोड पाउँदैछौं । इभेन्ट परियोजनाले छान्यो । डेढ करोड पाएका छौं । काउन्सिलिङ गर्ने कार्यालय खोल्दैछौं ।’
‘३० वर्ष एकै विद्यालयमा बस्दा अलग–अलग सोचका अभिभावक भेटिए । पहिला कुनै राम्रो काम गर्दा थरिथरिका सोच आउने गर्थे तर हाल त्यो प्रचलन अन्त्य भएको छ,’ प्रधानाध्यापक सिग्देलले भने । विगतमा १५ महिनासम्म तलब नखाएर पनि काम गरेको सम्झना उनीसँग छ ।
सिग्देलकी पत्नी र २ छोरा नेपालगञ्जमा बस्छन् । हेडसरको ५ वर्ष जति जागिर बाँकी छ । उनले यतै सानो घर बनाउने र यतै बस्ने योजना समेत बनाएका छन् ।
उनी १० वर्षसम्म तनहँुमा हुर्केका थिए । ‘गाउँमा ३ कक्षासम्म पढ्ने विद्यालय नजिक थियो । ४ कक्षा टाढा हुँदा जान सकिएन । कक्षा ३ मैले त्यही कारण दोहोर्‍याएँ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षाको महत्त्व बुझेर काकाकाकी बर्दियामा बस्नुहुन्थ्यो । त्यही गएँ अध्ययन गर्न ।’ त्यसपछि उनको पढाइ अगाडि बढेको थियो ।
जेठ १८, २०७६ मा प्रकाशित
थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।
जन्मजात दृष्टिविहीन भविष्य : फेसबूकबाट ‘लभ’ परेर बिहे, लोक सेवा पास गरेर जागिर
एसईई नतिजा : निजी स्कूललाई टक्कर दिने यी हुन् 'नमूना' सामुदायिक विद्यालय
अब्बल सामुदायिक विद्यालय ज्ञानोदय : एकै पटकमा १ सय ३ विद्यार्थीले ल्याए ‘ए प्लस’ !
दिउँसो कक्षा चलाउन विद्यालयको अटेर
एसईई बिदामा जुम्ल्याहा दाजुभाइले बनाए नेपालीमै सवाल–जवाफ गर्ने ‘मार्स रोबोट'
रजिस्ट्रार र सेवा आयोगका अध्यक्ष रुचाउँदैनन् विश्वविद्यालयको आवास
शिक्षामा भाँडभैलो : विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमय पूरा पढ्नुहोस
असार १५ साइतमा उपद्रो, बाबुरामको हली रुप र सिँचाइ–मल नपाउने किसान पूरा पढ्नुहोस
गुल्मीको सत्यवतीमा पहिरो : ९ जनाको मृत्यु, ४ जना अझै बेपत्ता [अपडेट] बुटवल - सत्यवती गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ । चार जना हराइरहेका छन् । पहिरोले घरहरू बगाउँदा सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा छ जना र...
रूसका सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच भेटवार्ता
आपूर्तिमन्त्री र भारतीय राजदूतद्वारा पेट्रोलियम पाइपलाइनको अवलोकन : समृद्धिको आधार रहेको मन्त्रीको टिप्पणी
देव गुरुङको खुलासा - ‘प्रतिपक्ष पटक–पटक सरकार बदलियोस् भन्ने चाहन्छ’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली राहतसहित पुगे गुल्मीको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा
कास्कीको पुरुन्चौरमा कामना सेवाकोे ९७ औं शाखा